Abuu Mansuur Al-amriiki oo ku Biiray 31 Ruux ee ku Jira Liiska Argigixisada
Home Somali News East Africa Abuu Mansuur Al-amriiki oo ku Biiray 31 Ruux ee ku Jira Liiska...
Dowlada Mareykanka ayaa Liiska Argigixisada waxa ay ku dartay Abuu Mansuur Al-amriiki , kaasoo dhalasho ahaan ka soo jeeda Dalkaasi Mareykanka.
Hey’ada Sirdoonka u qaabilsan Mareykanka ee FBI-da ayaa shalay ku dartay Liiska Argigixisada la raadainayo Omar Xamaami oo loo yaqaano Abuu Mansuur Al-amriiki , waxayna sheegeen saraakiisha FBI-da in Ninkan uu yahay Madaxda sare ee Alshabaab oo ah kooxo gacans aar la leh Alqaacida.
Omar Xamaami ayaa ku biiray 30 ruux oo la raadinayay , isagoo ku noqday 31 raga la radainayo , iyadoo laamaha amaanka mareykanka ay ninkan u diiwaan galiyeen Argigixiso.
Omar Xamaami ayaa sanadihii u dambeeyay ku sugnaa Soomaaliya gaar ahaan Shabeelooyinka iyo Jubooyinka , waxaana mareykanka uu Xamaami kaga shakisnaa inuu dhalinyarada mareykanka ku qal qaaliyo noqoshada Alshabaab iyo Alqaacida.
Waxana uu 28jirkan qoray bishii May ee sanadkan taariiq nololeedkiisa isagoo tilmaamay in waqti wanaagsan uu ku soo qaatay Alabama kahor inta uusan ku soo biirin ururka xiriirka la leh Alqaacida.
Hammami aabihiis oo ku nool Daphne, Alabama ayaa sheegay in arrinta ah in FBI ay raadinayso wiilkiisa ay tahay mid ka baxsan awoodiisa.
“Ma jiro wax aan ka sheegi karo ama aan ka samayn karo si aan xaaladan wax uga bedelo,”ayuu yiri Shafik Hammami.
Omar Xamaami ayaa hada ka dambo waxa dagaal kaga hor imaan doono ciidamada ay walaalaha yihiin ee Mareykan , kuwaasoo dilay saraakiil badan oo ka tirsan Alshabaab sida Macalin Xaashi Aadan Ceyrow.